6 Arimood Oo U Sabab Ah In Philippe Coutinho Uu Ku Fashilmo Barcelona | Laacib.net
6 Arimood Oo U Sabab Ah In Philippe Coutinho Uu Ku Fashilmo Barcelona
February 8, 2019 Balaleti
Xaalada Philippe Coutinho ee Barcelona ayaa sii xumaaneysa marba marka ka danbe, waxaana haatan la filayaa in ciyaaryahanka uu xagaaga raadsan doono meel uu kaga baxsado ama haddii kale waxa uu saaxiib la noqon doonaa kursiga keydka ee Barcelona.
Hadaba waxaan eegeynaa lix waxyaabood oo sabab u ah in Coutinho uu ku fashilmo Barcelona.
1. QAAB CIYAAREEDYO LIITA
Coutinho ayaa si fiican ku bilowday noloshiisa Barcelona isagoo dhaliyay 10 gool islamarkaana caawiye ka noqday labo kale xilli ciyaareedkiisii ugu horeysay ee uu kala bar ciyaaray.
Xilli ciyaareedkan xitaa si fiican ayuu ku bilowday laakiin qaab ciyaareedkiisa ayaa hoos u dhacay. Waxa uu dhaliyay goolal ka yar (sideed) intii uu dhaliyay xilli ciyaareedkii 2017-18 inkastoo uu ciyaaray kulamo ka badan.
Waxaa jira walaac rasmi ah oo laga qabo in qaab ciyaareedkiisa uusan aheyn mid u fiican sidii hore.
2. CADAADISKA AY LEEDAHAY INUU BEDELO INIESTA
Inuu ka ciyaaro booskiisa uu baneeyay Andres Iniesta waxa ay mar walba u aheyd howl culus.
Inkastoo Coutinho loo arkayay bedelka Iniesta hadana isaga iskuma arko sidaasi, kooxdana ulama heysto si la mid ah sidii uu u la heystay halyeeyga reer Spain.
3. QAAB CIYAAREEDKA FIICAN EE DEMBELE
Waxaa jiray walwal laga qabay in Ousmane Dembele uusan laheyn maskaxdii uu ugu ciyaari lahaa Barcelona gaar ahaan markii uu ka soo daahay waqtiga tababarka.
Laakiin xiddiga reer France ayaa dabcigaas iska bedelay isagoo dhaliyay shan gool islamarkaana caawiye ka noqday afar kale intii u dhaxeysay October ilaa December.
Dhaawac soo gaaray Dembele ayaa u ogolaaday Coutinho inuu helo daqiiqado uu ku ciyaaro laakiin soo laabashada 21 jirkaan ayaa war xun u ah Coutinho.
4. ‘COUTINHAZOS’ OO LA WAAYAY
Ereyga ‘Coutinhazos’ waxaa lagu qeexaa darbooyinkii quwada lahaa ee uu Coutinho ka soo tuuri jiray banaanka xerada ganaaxa halkaasoo uu ka dhalin jiray goolal lama filaan ah.
Xilli ciyaareedkii hore waa la arkayay xitaa Koobka Adduunka ayaa lagu arkay markii uu gool qurux badan ka dhaliyay Switzerland.
Laakiin xilli ciyaareedkan waa la waayay, Coutinho laguma arkin isagoo dhalinaya goolal la mid ah kuwii uu ka dhaliyay Alaves, Leganes iyo Sevilla.
Markii ugu danbeysay ee uu ciyaar furan gool ka dhaliyay horyaalka La Liga waxa ay aheyd 28kii bishii October waxaana ay aheyd mid uu goolka u dhawaa.
Waxa uu tan iyo markaas dhaliyay seddex gool oo kala ah labo rigoore iyo kubad madax ah. Darbadiisa Coutinhazos waa la la’ yahay weli.
5. WUXUU NOQDAY MID LA SAADAALIN KARO
Wax u shaqeynaya ma jiraan Coutinho waqti xaadirkaan laakiin isagaba isma caawinayo waxa uu noqday mid ciyaartiisa la saadaali karo.
Kooxaha ka soo horjeeda waa ay iska ogyihiin inuu garabka midig ka soo xaroodo oo uu isku dayo inuu darbo tuuro. Coutinho uma muuqdo mid la soo shirtaga dhaqdhaqaaq taas ka duwan, taasoo howsha u sahashay difaacyada.
6. KALSOONIDA AYAA KA LUNTAY
Coutinho waxaa ka muuqata kalsooni la’aan marka uu garoonka ku jiro.
Si ay kalsoonida dib ugu soo laabato waxaa loo baahan yahay in sabar badan loo muujiyo laakiin Barcelona waqti uma heyso inay u sabarto Coutinho.